Ungangqina njani ukuba iQuadrilateral yiRhombus
Ungasebenzisa ezi ndlela zintandathu zilandelayo ukubonisa ukuba i-quadrilateral yirhombus. Iindlela ezintathu zokugqibela kolu luhlu zifuna ukuba ubonise kuqala (okanye unikwe) ukuba i-quadrilateral ekuthethwa ngayo yiparallelogram:
Ukuba onke amacala e-quadrilateral adityaniswa, ngoko yirhombus (umva wenkcazo).
Ukuba i-diagonals ye-quadrilateral bisect zonke ii-angles, ngoko yi-rhombus (incoko yepropathi).
Ukuba ii-diagonals ze-quadrilateral ziyi-bisectors ezijikelezayo enye kwenye, ke iyi-rhombus (incoko yepropathi).
Ingcebiso: Ukuyibona ngolu hlobo le nto, thabatha iipeni ezimbini okanye iipensile zobude obahlukeneyo kwaye ubenze bawele omnye komnye kwii-engile ezilungileyo nakwiindawo zabo eziphakathi. Iiphelo zazo ezine kufuneka zenze imilo yedayimane- irhombus.
Ukuba amacala amabini alandelelanayo eparallelogram adityaniswa, ngoko yirhombus (ayibuyi ngasemva inkcazo okanye incoko yepropathi).
Ukuba nayiphi i-diagonal yeparallelogram igawula ii-engile ezimbini, ngoko ke yirhombus (ayibuyi ngasemva kwinkcazo okanye incoko yepropathi).
Ukuba i-diagonals yeparallelogram i-perpendicular, ke i-rhombus (ayikho ingcaciso yenkcazo okanye ingxoxo yepropati).
Nabu ubungqina berhombus bakho. Zama ukuza nesicwangciso somdlalo ngaphambi kokufunda ubungqina beekholamu ezimbini.
Ingxelo 1 :
Isizathu sengxelo 1 : Inikiwe.
Ingxelo 2 :
Isizathu sengxelo 2 : Amacala achasene noxande ahambelana.
Ingxelo 3 :
Uluhlu lokutya kwezilonda
Isizathu sengxelo 3 : Inikiwe.
Ingxelo 4 :
Isizathu sengxelo 4 : NjengeTheyori yoLwahlulo.
Ingxelo 5 :
Isizathu sengxelo 5 : Zonke ii-angles zoxande zilungile.
Ingxelo 6 :
Iziphumo ze-epoetin alfa
Isizathu sengxelo 6 : Zonke ii-angles ezilungileyo zidibeneyo.
Ingxelo 7 :
Isizathu sengxelo 7 : Inikiwe.
Ingxelo 8 :
Isizathu sengxelo 8 : I-midpoint yahlulahlula icandelo libe ngamacandelo amabini adibeneyo.
Ingxelo 9 :
Isizathu sengxelo 9 : I-SAS, okanye i-Side-Angle-Side (4, 6, 8)
Ingxelo 10 :
Isizathu sengxelo 10 : I-CPCTC (iiNxalenye ezihambelanayo zoonxantathu baseCongruent baMnandi)
Ingxelo 11 :
Isizathu sengxelo 11 : Inikiwe.
Ingxelo 12 :
Isizathu sengxelo 12 : Ukuba unxantathu yi-isosceles, ke imilenze yayo yomibini iyahambelana.
ukuthatha i-lasix kodwa ungachami
Ingxelo 13 :
Isizathu sengxelo 13 : Ukutshintsha kwezinto (10 no-12).
Ingxelo ye-14 :
Isizathu sengxelo 14 : Ukuba i-quadrilateral inamacala amane adibeneyo, ngoko ke yirhombus.
uyidlulisa njani i-asvab
ubhala njani i-sonnet ye-shakespearean
oya kwisitya esikhulu
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-cetirizine hydrochloride